लुडो खेलबाट प्रधानमन्त्री छानौ - NepalDut NepalDut
हामीलाई कम्युनिष्ट सिद्दान्त सिकाउनेहरू “संसदिय ब्यबस्था दलाल पूजीपतिहरुले बाख्राको टाउको देखाएर कुकूरको मासु बेच्ने ब्यबस्था हो” भनेर सिकाउने गर्दथे। धेरै दु:ख पाएका, मार्क्सवादलाई जीवन पद्दतीमा उतारेका, भुइँ मानिसहरुको लागि जीवन समर्पण गरेका राता मान्छेहरुले भन्दा हैन होला जस्तो लाग्दथ्यो किनकी त्यस बेला पुजिवादी ब्यबस्था भएका देशहरुले आर्थिक उन्नति गरेका थिए । तर अहिले आएर आफैले भोग्दा हो कि क्या हो जस्तो लाग्न थालेको छ। नेपालका संसदीय मुल धारका कम्युनिष्ट पार्टी र तिनीहरुको मूल नेतृत्व देख्दा या त ब्यबस्था वा नेतृत्व मध्ये एकमा खोट भएको कुरा प्रष्ट देखिन्छ। नेपालमा मात्र होईन संसदीय प्रजातन्त्रको “हजुर बा” अमेरिकामा समेत प्रजातन्त्रको बैध सन्तान हु भन्ने ट्रम नामक सनकीले प्रजातन्त्रको सक्कली रुप राम्ररी देखाई दिए।
कुनै पनि काम तल्काल गर्न सकिने वा नसकिने तर्कले ठीक वा बेठिक अथवा तल्काल फाईदा वा बेफाईदाको हिसाव-कितावले सहि वा गलत छुट्याउने प्रवृतिले नेपालको राजनीति गिजलिएको छ। यहा राजनीतिक आदर्श, सिद्दान्त र चरित्र भन्दा पनि मेरा “बा” जाती र तेरा “बा” खत्तम भनी तल्लो स्तरको गालि गलौज गर्दै आफ्ना “बा” काईदाका हुन् र तेरा बा झुर हुने भन्ने प्रमाणीत गरिदै छ । तिनै बाहरुका आफ्ना बैध वा अबैध सन्तानहरुले मध्यान्नको घामको छाया देखाएर बाङ्गो रुखको सिधा छाया देखाउने कोसिस गरिरहेका छन्।
सत्ता र शक्तिको अनुकुलतामा ब्याख्याले विश्वको सर्बोत्तम संबिधान आज उत्तानटाङ्ग परेको छ।
भाग -बिलो मिल्दासम्म सबै क्रान्तिकारी हितैसी हुने र अंस बण्डामा गैरी खेतमा बराबरी नहुदा बटारिने प्रवृति संसदीय व्यबस्थाको सौन्दर्य नै रहेछ । हिजो सम्म राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो अब आर्थिक क्रान्तिको पालो भन्नेहरुलाई संसदीय व्यवस्थाले कसरी खुचिङ्ग गराउदो रहेछ त्यो सबैको सामु प्रष्ट छ। संसदीय ब्यबस्थाको रंग पनि छुट्याउनै मुस्किल हुदो रहेछ । एउटा स्तरको चुनावमा बिर्खे संग मिल्ने र अर्को स्तरको चुनावमा गोर्खे संग मिल्दा पनि हुने क्या गजवको ब्यबस्था ! हुन त आफु समयमा बस स्टपमा न आउने अनि समयमा बस हिड्यो भने ला बस त छुट्यो भन्ने। खासमा छुटेको आफु हो तर बसलाई दोष दिने हामी नेपाली पनी क्या गजवका छौ।
यो संसदीय ब्यबस्था कस्तो भट्टी रहेछ जहा भित्र जस्तो रुप वा गुण भएका पदार्थलाई पनी एउटै रुप र गुणमा रुपान्तरण गर्दिने? असल र सिद्दान्तका पक्का घनश्याम भुसालहरु पनी अमेरिकन मेटल बजेर कक्रक्क परेका सलह जस्ता भएको देखिए कै हो। बर्तमान काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्नु पनी संसदीय सौन्दर्यको उच्चतम रुप नै हो। यो ब्यबस्था कति ज्याद्रो हुदो रहेछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको यो कदमबाट सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। सत्ता र शक्तिको अनुकुलतामा ब्याख्याले विश्वको सर्बोत्तम संबिधान आज उत्तानटाङ्ग परेको छ। संबिधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेवाङ्गको बोलि नै बन्द भएको छ।ओलीको बयलगाडामा राजावादीहरुको सवारको सुबिधा उपलब्ध गराएको छ।
आज संसद बिघटनको मुद्दा न्यायलयमा पुगेको छ र संसदीय पद्दति अनुसार न्यायालयमा विचाराधीन भएको मुद्दामा बोल्न प्रधानमन्त्री बाहेक अरुलाई छुट छैन।
आज संसद बिघटनको मुद्दा न्यायलयमा पुगेको छ र संसदीय पद्दति अनुसार न्यायालयमा विचाराधीन भएको मुद्दामा बोल्न प्रधानमन्त्री बाहेक अरुलाई छुट छैन। कुनै खास राजनीतिक दर्शन लिएकै भरमा दसौ पटक छोड्न आदेश दिदा समेत अदालत परिसर बाटै पटक पटक गिरफ्तार गर्दा चाहि हाम्रो त्यही अदालतको मानहानी हुदैन तर संविधानको ठाडो बर्खिलाप गर्दा समेत बोल्दा मान-हानी हुने ब्यबस्था क्या गज्जवको छ।
अन्तरास्ट्रिय प्रचलन, विधिको शासन र राजनैतिक निर्णय आदि इत्यादिको सन्दर्भ दिदै चित्तले देखेको आधारमा भोलि संसद बिघटनको निर्क्योल होला र ओलीको बिघट्नलाई विधिवत सदर हुने देखिन्छ। फेरी चुनावको रन्कोले नेपाल एक पटक तातिने छ। चुनावमा खसी, बोका, सुँगुर, भैसी, रागा, कुखुराको खपत ह्वात्तै बढने छ र तिनीहरुको मूल्य बढने छ। मतपत्र गणनाको सुरक्षार्थ ग्याबियन वायर (तार जाली) को ब्यबस्था गर्नु पर्ने छ।
अर्बौको खर्च हुनेछ र अन्तमा यिनै, वृद्द, टेस्टेड पहाडे बाहुनहरु नै निर्वाचन विजयी भएको घोषणा हुने छ। यिनै मुखियामध्येबाट सुपर मुखिया छानिने छ र फेरी उही खेलको पुनरावृति हुने छ । भनिन्छ नि जन्मिदा सास हुन्छ नाम हुदैन तर मृत्य हुदा नाम हुन्छ सास हुदैन । मेरा पृय नेताहरु, मृत्युपछिको तपाईको नामको अगाडि “सु” वा “कु’ के हुने त्यो तपाईको छनोट हो तर तपाईलाई “गुमनाम ” हुने अवसर छैन किनकी तपाईले जनताको रगत पसिनाको भोग गर्नु भएको छ ।
अत: यी सबै लफडा गर्नु भन्दा लुडो खेलाएर प्रधानमन्त्री छान्ने ब्यबस्था भएमा देशको श्रोत र साधनले कोरोनाको भ्याक्सिन किनेर जनतालाई लगाउन पाए देशका युवाहरु अरवको मरुभूमिमा रगत पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने थिए र त्यसबाट सरकार संचालनमा तपाईहरुलाई नै सहज हुने थियो । आगे तपाईको जो विचार !